Shiinaha warshad gees ah oo loogu talagalay Boom wiish Teleler shirkad soo saaraha Shiinaha iyo soosaarayaasha | Hygg
Qarka wershadaha loogu talagalay soosaarida shirkadda Boom wiish ee soo saaraha Shiinaha
Waa maxay khafiifka warshadaha?
Iqarka dushiisa waxaa aad u isticmaala noocyo badan oo gawaari ah sida wiishka kor u kaca, cagaf cagafyada, wiishka, maareynta taleefanka, dhajiyaha dhabarka dambe, qotomaha gawaarida iwm. geesaha warshadaha sidaa darteed way adag tahay in la kala saaro. Laakiin badankoodu waa qaab dhismeedka 1-PC-ga oo cabirkiisu ka hooseeyo 25 inji. Laga soo bilaabo 2017 HYWG wuxuu bilaabay inuu soo saarocirifka warshadaha sababta oo ah macaamiisheenna badan ee OE ayaa leh dalab. Volvo Korea waxay waydiisatay HYWG inay horumarisogeesaha warshadaha qodista iyo gawaarida gawaarida. Kooxda Zhongce Rubber waxay waydiisatay HYWG inay horumarisogeesaha warshadaha kor u qaadista. Sidaa darteed 2020 HYWG waxay warshad cusub ka furtay gobolka Jiaozuo Henan si diirada loo saaro iqarka dushiisa soo-saar, awoodda sannadlaha ah ee cirifka warshadaha waxaa loogu talagalay 300,000 rimis sanadkiiba. Wareegyada warshadaha waxaa lagu soo ururiyey oo kaliya taayirka caadiga ah ee pneumatic laakiin sidoo kale taayirka adag iyo taayirka buuxa ee polyurethane, xarkaha iyo xalka taayirku waxay kuxiran yihiin dalabka gaadhiga. Muddooyinkii dambe suuqa wiishka ee kor u kaca ku socda ee Shiinaha ayaa soo kordhayay, HYWG waxay soo saartay qafisyo kala duwan oo buuxa oo loogu talagalay qalabka wiishka boon.
Immisa nooc oo buufinta warshadaha ah?
Cirifka warshadahainta badan waa 1-PC rim, oo sidoo kale loo yaqaan hal-gees gees ah, waxaa laga sameeyaa bir hal bir ah oo saldhig u ah salka geeskeeda waxaana loo qaabeeyey noocyo kala duwan oo astaamo ah, 1-PC qar wuxuu caadi ahaan ka hooseeyaa 25 inji, sida qarka gaariga 1-PC rim waa miisaan fudud, culeys fudud iyo xawaare sare, waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa gawaarida fudud sida cagafyada beeraha, trailer, telefanka gacanta, baareyaasha gawaarida, wiishka kor u kaca iyo noocyada kale ee mashiinada wadada. Xamuulka 1-PC rim waa fududahay.
Muxuu yahay cirifka warshaduhu?
Kuweena cirifka warshadaha waxaa loo isticmaali karaa gawaarida sida:
(2) Kor u qaadista
(3) Shaakada Backhoe
(4) Gawaarida qotomaha
6.75 * 17.5 1-PC 225 / 50-17.5 Kor u qaadista
7.00T * 16-2PC 2-PC 9.00-16 Kor u qaadista
11X20 1-PC 315 / 55D20 Kor u qaadista
11X24 1-PC 36X14D610 Kor u qaadista
10X24 1-PC 33X12D610 Kor u qaadista
12X24 1-PC 385 / 65D24 Kor u qaadista
11.75X24.5 1-PC 355 / 55D625 Kor u qaadista
13X24.5 1-PC 15-625 Kor u qaadista
13X28 1-PC 385 / 45-28 Kor u qaadista
9.75X16.5 1-PC 26X12-16.5 Kor u qaadista
6.75x16.5 1-PC 240 / 55D17.5 Kor u qaadista
16.5 × 9.75 1-PC 12-16.5 Guud
16.5 × 8.25 1-PC 10-16.5 Guud
12X7 1-PC 23X8.50-12 Guud
15X13 1-PC 31 / 15.5-15 Guud
17.5X10.5 1-PC 14-17.5 Guud
12X10.5 1-PC 26X12-12 Guud
16JX17 1-PC 500 / 40-17 Guud
Faa'iidooyinkayada qarka warshadaha?
(1) HYWG waxay bixisaa noocyo buuxa oo ah geesaha warshadaha gaar ahaan loogu talagalay kor u qaadista qalab.
(2) HYWG tayada waxaa cadeeyay OEM weyn sida Volvo, JCB iyo Dingli.
(3) HYWG tayada waxaa damaanad qaadaya qalab jarista iyo qalab adag, birta inteeda badan aan isticmaalno waa Q345B oo u dhiganta S355 Yurub iyo A572 USA.
(4) HYWG waxay bixisaa gaarsiin deg deg ah iyo MOQ yar
Hore: Qalabka Forklift ee loogu talagalay Linde iyo shirkadda BYD Shiinaha OEM
Xiga: OTR Rim qaybaha Shiinaha OEM soo saaraha 25 ″ qaybood